Guddoomiye-xigeenka Baarlamaanka Kenya oo ka hadlay socdaal uu ku tegay Magaalada Laascaanood | Somaliland.Org
December 28, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiye-xigeenka Baarlamaanka Kenya Faarax Macallin, ayaa booqasho ku tegay Xarunta Gobolka Sool ee Laascaanood.
Faarax Macallin oo ay socdaalkan ku wehelinayeen Masuuliyiin Xukuumadda ka tirsan oo uu horkacayay Wasiirka Arrimaha gudaha Cabdilaahi Ismaaciil Cali (Cirro), ayaa kulamo-doceedyo la yeeshay madax-dhaqameedyada iyo Odayaasha deegaankaas. “Ujeedadayadu waxay ahayd in aanu indhahayaga ku soo aragno xaaladda halkaa (Laascaanood) ka jirta. Waxaanu soo aragnay meel xasilooni iyo nabadi ka jirto. Dadkii deegaanka waanu la hadalnay oo waanu la fadhiisanay, waxaananu ku boorinay inay nabad-gelyada adkeeyaan. Markii ugu horraysay ee aan Waddankan arko ayay ahayd, Laascaanoodna ay iigu horraysay, waxaanu safarkani ii ahaa waayo-aragnimo badan. Wixii talo iyo tusaale ahaana waanu isweydaarsanay dadkii deegaanka.” Ayuu yidhi Faarax Macallin oo u waramay Laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da.
Mar Guddoomiye-xigeenka la waydiiyay sababta keentay in uu socdaalkiisan ku dhaafo Sanaag iyo Togdheer oo uu u tegay Sool oo masaafo ahaan ka shishaysa halka uu ka tegay ee Hargeysa, ayaa waxa uu ku jawaabay oo uu yidhi, “Awdal baan tegay, Berberaan tegay, Hargeysaan joogay, Sool baan tegay, ma idlayn karo (ma dhammayn karo) kulligood oo Sanaag iyo Togdheer ma wada mari karo oo waqti bay igu qaadanaysaa, waqtiga aan haystaana wuu yar yahay. Markaa imika iyagana farriintii aan ka haystay ayuun baan gudbinayaa. Xasilloonidaa wax la siisan karaa ma jirto.”
Sidoo kale, mar la waydiiyay farriinta uu la noqonayo ee uu Dawladdiisa iyo Caalamkaba u gudbinayo, ayaa wuxuu yidhi “In xasilloonida iyo nabadda Somaliland ka jirta loo baahan yahay in adduunku garab ku siiyo, haddii xasilloonidaas la garab-qaban waayo oo sida horumarka Jidadka, Tacllinta, Biyaha, Caafimaadka iyo Beeraha aan laga garab-qabanin oo aanay Nolosha dadku noqon mid lagu sabri karo, way adag tahay in xasillooni la ilaaliyo. Baro-kac badani wuu iska jiraa oo meesha layga soo doortay anigu waa meesha ay ku taalo Xerada Dhadhaab oo ay joogaan qaxooti ka badan 300,000 ku nool yihiin, waxaana ku jira ilaa 25,000 oo Qaxooti ah oo ka yimi gobolka Sool, in badan oo kale oo gobollada kale ee Somaliland ka yimi way ka jiraan.” Waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “In wax laga qabtaa loo baahan yahay oo sifo kuwii horena ku soo noqdaan oo nolol iyo horumar leh waa in wax lala qabto dalkan Somaliland. horumarka haddii la sugo, xasilloonida iyo dimuqraadiyadda waa la sugayaa. Dhibta hadda adduunka ku wajahan ee ah dadka is-qarxinaya ee aan cidna u aabbo yeelaynin, iyagana in dhalinyaro mustaqbal leh aan laga heli karin. Balse, laakiin haddii gaajadu iska badan tahay lama sugi karo dimuqraadiyadda iyo amniga.”
Ugu dambayntiina waxa uu farriin u jeediyay Siyaasiyiinta iyo Shacabka Somaliland. “Nolosha bani’aadamku waa qasab in wax laysku qabto oo xukunka iyo horumarinta ayaa laysku qabsanaa, wax kasta oo aad isku qabataan in wada-hadal lagu dhammeeyo weeye, ha laysku samro oo ha la xisaabtamo oo marnaba yaanay faraha ka bixin ee wada-hadal ha lagu dhammeeyo.” Ayuu yidhi Faarax Macallin.